हामीकहाँ दैनिक लोडसेडिङ हुन्छ, तर लोडसेडिङ हुँदै गर्दा पनि विद्युतिकरणको कार्य भने रोकिएको छैन रे, रोकिनुपनि हुँदैन । लोडसेडिङ भइरहेको छ, अहिले त बिजुलीको माग धान्न सक्या छैन, अन्यत्र विद्युतिकरण किन गर्नुपर्यो भन्ने तर्क नि हुँदो हो । तर मेरो विचारमा विद्युतिकरण सँगसँगै हुँदै जानुपर्छ, हाइड्रोपावरहरुको निर्माण छिटो छिटो हुँदै जानुपर्छ । बिजुलीको खम्बा उभ्याइसकेपछि, तार टाँगिसकेपछि, लोडसेडिङ नै हुने भएपनि घरमा बिजुली बल्न कति समय लाग्ला? १ महिना, १ वर्ष ? तर होइन बिजुलीको खम्बा गाडेको दशौँ वर्ष पछि पनि बिजुली नबल्न सक्छ । हो, नबल्न सक्छ? कारण, हाम्रो नेताहरुको राजनितीक दाउपेच । “विकास” भन्ने कुरा, राजनितिक दल र नेताहरुको राजनितिक अस्त्र । माथि फोटोमा बिजुलीका खम्बा र तारहरु देख्न सक्नुहुन्छ । तपाईहरु अनुमान गर्नसक्नुहुन्छ? यो खम्बा कहिले गाडियो? किन गाडियो? निश्चय नै बिजुलीको खम्बा बिजुलीका लागि नै हो । तर बिजुलीको खम्बा गाडिनु चुनावमा भोट माग्ने काइदा रहेछ भनेर, म बल्ल बुझ्दैछु । यो कुरा कुनै दुर्गम गाउँको होइन, यो कुरा धेरै टाढाको पनि होइन । हप्ता दिन पहिले, घरजाँदा आफ्नो जन्मस्थ
करिव १ वर्ष पहिले, पहिलोपटक बेङ्लोर पुगिएको थियो, रेल चढेर । नेपाल देखि भारतको बेङ्लोर सम्मको अनुभवहरु यहाँ , यहाँ , यहाँ , यहाँ , यहाँ र यहाँ छन् । नेपाल देखि बेङ्लोरसम्म पुग्न रेलमा मात्रै पटना देखि बेङ्लोर सम्म लगातार ४८ घन्टाको यात्रा तय गरिएको थियो । पढ्न अल्छि नमान्ने, साथीहरुले मेरा यात्रा अनुभवहरु पढ्नसक्नुहुन्छ । बेङ्लोरमा रहँदा बस्दा, दाइहरु सँग केही ठाउँहरु पुगिएको थियो, आफूसँग भएको मोबाइलले केही फोटो पनि खिचिएको थियो तर ब्लगमा भने न बेङ्लोर बसाइको अनुभव लेखियो न कुनै फोटो नै राखियो । आज कम्प्युटरमा आफ्ना फोटो एल्बमहरु हेर्दै जाँदा बेङ्लोर बसाइको क्रममा खिचिएका केही फोटोहरु देखेँ । फेसबुकमा अपलोड गरौँ भने, अलि पुराना लाग्ने भए, अत: ब्लगमै केही फोटोहरु राख्नुपर्ला जस्तो लाग्यो । सायद, शनिवार वा आइतबारको दिन थियो । पानी पर्ला पर्ला झैँ हुँदै थियौँ, हामी ( म र लक्ष्मी दाइ), बेङलोरको एच ए एल रोडमा (HAL Road – Bangalore) रहेको संग्राहलयमा भारतमा निर्माण गरिएका, नयाँ तथा पुराना प्लेनहरु हेर्न गयौँ । एच ए एल (HAL) को अर्थ हुन्छ, हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेड ( Hindustan Aeronaut
Listen to Bulbul Episode-145 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । " एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Bulbul isaRadio Program (a gajal program). Thanks to BULBUL Team for bringing suchawonderful program.You can directly send your suggestion, comments & even your gajal to: bulb
The most awaited Nepali Movie ‘Highway’ which is set to release on 20th July 2012 (साउन ५, २०६९) has released its song 'Laija Re Laija Re’ (Paplu) online. Song ‘Paplu’ is shot on actress Reecha Sharma, who has playedarole of bar dancer in the movie. Director Deepak Rauniyar said, “Clearly, It’s not an item song, though song was shot in the dance bar”. “There’s no song in the movie other than Paplu”, adds Rauniyar. “Story needs this song and it’s not an item song ratheradance number”, said Reecha Sharma inatelevision interview. Watch Nepali Movie Highway’s Song ‘Paplu’ Vocal: SUBANI Moktan Lyrics: BHUPENDRA Khadka Music: MANOJ KC Editor: LOKESH Bajracharya Camera: JYOTI Keshar Simha Director: DEEPAK Rauniyar The first crowd funded Nepali movie ‘Highway’, which has been creatingabuzz ever since it went into production was screened at one of the most prestigious film festival ‘Berlin Film Festival 2012’ on February. Directed by Deepak Rauniy